🥇 ngwa maka oche enyemaka
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 848
Vidiyo nke ngwa maka oche enyemaka
Nye ngwa maka oche enyemaka
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ngwa Desk Help abụrụla ihe ama ama iji megharịa ụkpụrụ nke ijikwa nhazi nke teknụzụ ma ọ bụ nkwado ọrụ, webata usoro nhazi ọhụrụ, melite ọrụ na ịzụlite azụmahịa ahụ n'ụzọ nkịtị. A kwadoro ịdị irè nke ngwa ahụ ugboro ugboro na omume. Njikwa n'ime paramita Desk Help na-aghọ mkpokọta, ngwaọrụ niile dị mkpa na-apụta nke na-enye gị ohere soro ọrụ na arịrịọ dị ugbu a, dozie ụkpụrụ na akụkọ na-akpaghị aka, wee hazie akụrụngwa na ọnụ ahịa.
Usoro USU Software (usu.kz) anọwo na-emeso okwu nke nkwado teknụzụ dị elu ruo ogologo oge, nke na-eme ka o kwe omume ịtọ ókèala nke Desktọ enyemaka, ịhapụ ngwa kachasị dị irè nke na-egosi ngwa ngwa. uru ya. Ọ bụrụ na ị na-amata ngwa ngwa, anyị na-akwado ka ị nyochaa interface enyi na nke nwere nghọta. Ọ nweghị ihe karịrị akarị ebe a. Ndị na-emepụta ihe na-adakarị nguzozi n'etiti arụmọrụ na mmasị nke ọrụ. Otu ihe onwunwe na-erikpu nke ọzọ. Ndekọ Desk Enyemaka nwere ozi zuru ezu gbasara arụmọrụ yana ndị ahịa ugbu a. Ndị ọrụ enweghị nsogbu ịwelite ebe nchekwa ngwa ka ha lelee iwu emechara, rụtụ aka na dọkụmentị ebe nchekwa, akụkọ, na mụọ ọkwa mmekọrịta ha na ndị ahịa. Ngwa na-egosipụta ngwa ngwa ọrụ ozugbo ozugbo. Nke a na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịzaghachi nsogbu, nyochaa ọnọdụ nke ego ihe onwunwe na akụrụngwa ọrụ, na-achịkwa oge nke usoro ahụ, kpọtụrụ ndị ahịa ngwa ngwa iji kọwaa nkọwa ụfọdụ.
Site na Desk Enyemaka ọ dị mfe ịgbanwe ozi, faịlụ eserese, ederede, akụkọ njikwa, debe tebụl ọrụ site na nhazi ngwa arụnyere n'ime ya. Ọ bụrụ na akwụsịla iwu a, mgbe ahụ ndị ọrụ anaghị enwe nsogbu n'ịchọpụta ihe kpatara igbu oge. Awepụghị nhọrọ nke iji ngwa ahụ iji kwalite ọrụ Desk Help, itinye aka na nzipu ozi SMS, soro ndị ahịa kparịta ụka. Emejuputala modul dị iche maka ọrụ ndị a. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme ka ikike CRM bụrụ otu n'ime ihe ndị kacha mkpa chọrọ ọrụ akpaaka.
N'oge a, a na-eji mmemme Desk Help n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Mpaghara arụ ọrụ nke ngwa abụghị naanị na mpaghara IT. Ndị otu gọọmentị nwere ike iji sọftụwia a lekwasịrị anya na mmekọrịta ndị mmadụ, obere ụlọ ọrụ na ndị ọchụnta ego n'otu n'otu. Akpaaka ga-abụ ngwọta kacha mma. Ọ dịghị ụzọ dị mfe, dị elu, na nke a pụrụ ịdabere na ya iji mee ka ọnọdụ nchịkwa na nhazi dị mma, webata usoro mmepụta ihe, nyochaa arụmọrụ nke nhazi na kọntaktị mpụga. Ngwa Desk Enyemaka na-enyocha akụkụ arụmọrụ nke ọrụ yana nkwado teknụzụ, na-enyocha ọganihu na oge ngwụcha nke ngwa, ma na-enye nkwado akwụkwọ. Ọ dịghị mkpa itinye oge ọzọ na arụ ọrụ ọkọlọtọ, gụnyere ịnakwere arịrịọ na ịnye iwu, usoro ndị ahụ na-akpaghị aka. Ọ dị mfe karị idobe ihe omume abụọ a na-eme ugbu a yana mmemme akwadoro site na onye na-eme atụmatụ. Ọ bụrụ na ụfọdụ oku chọrọ akụrụngwa agbakwunyere, onye enyemaka eletrọnịkị na-echetara gị nke a. Usoro enyemaka Desk dị mma maka ndị ọrụ niile na-enweghị mgbochi ọ bụla siri ike. Ọkwa agụmagụ kọmputa adịchaghị mkpa.
Ngwa ahụ na-akụda usoro mmepụta (ọrụ nkwado teknụzụ ozugbo) n'ime usoro a kapịrị ọnụ iji wusie ogo njikwa ike ma zaghachi ozugbo na obere nsogbu. Ohere mepere ugbu a iji soro ndị ahịa kparịta ụka ozugbo, gbanwee ozi na izipu SMS. Na mgbakwunye, ndị ọrụ nwere ike ịgbanwe ngwa ngwa eserese na faịlụ ederede, akụkọ nyocha na ego.
A na-egosipụta arụmọrụ nke ndị ọkachamara Desk Help na ihuenyo nke ọma, nke na-enye ohere ịhazigharị ọkwa nke ọrụ dị ugbu a na ịtọ ọrụ ndị ọrụ na-esote. Site n'enyemaka nke ngwa ahụ, a na-enyocha arụmọrụ nke ọkachamara ọ bụla, nke na-enyere ndị ọrụ oge niile aka imeziwanye nkà, chọpụta ihe ndị ka mkpa, ọnọdụ nsogbu nke nzukọ ahụ. Awụnyere modul ngosi na ndabara. Nke a bụ ụzọ kachasị mfe iji dobe mkpịsị aka gị n'ihe omume. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ ga-eju gị anya maka okwu nke ijikọ ikpo okwu na ọrụ na ọrụ dị elu. Mmemme bụ ihe ngwọta kachasị mma maka ụlọ ọrụ IT dị iche iche, ọrụ nka ma ọ bụ ọrụ nkwado, ụlọ ọrụ gọọmentị, ma ọ bụ ndị mmadụ n'otu n'otu.
Ọ bụghị ngwaọrụ niile ka etinyere na ụdị bụ isi. Ụfọdụ nhọrọ dị maka ego. Ị kwesịrị ịkpachara anya mụọ ndepụta kwekọrọ. Malite ịhọrọ ngwaahịa ziri ezi na ụdị ngosi. Nnwale a bụ n'efu kpamkpam. Narị afọ abụọ gara aga, Adam Smith mere nchọpụta dị ịrịba ama: a ghaghị imebi mmepụta mmepụta ihe n'ime ọrụ kachasị mfe na nke kachasị mkpa. O gosiputara na nkewa nke ọrụ na-akwalite uto nrụpụta ka ndị ọrụ lekwasịrị anya n'otu ọrụ na-aghọ ndị omenkà nwere nkà ma na-arụkwa ọrụ ha nke ọma. N'ime narị afọ nke 19 na nke 20, ndị mmadụ haziri, wulite na ụlọ ọrụ jikwaa, nke ụkpụrụ nke nkewa ọrụ nke Adam Smith na-eduzi. Otú ọ dị, n'ime ụwa nke oge a, o zuru ezu ileba anya nke ọma na ụlọ ọrụ ọ bụla - site na ụlọ ahịa okporo ámá gaa na nnukwu mba dị ka Microsoft ma ọ bụ Coca-Cola. A ga-achọpụta na ọrụ nke ụlọ ọrụ nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke usoro azụmahịa ugboro ugboro, nke ọ bụla n'ime ha bụ usoro nke omume na mkpebi iji nweta otu ihe mgbaru ọsọ. Nnabata nke ndị ahịa nyere iwu, nnyefe nke ndị ahịa, ịkwụ ụgwọ ụgwọ ndị ọrụ - ndị a niile bụ usoro azụmahịa nke ngwa inyeaka dị oke mkpa.